Oggolaansho Kac — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
"Trip ee ku qoran buug aan u malaynayaa in qof kasta oo dhalinyaro u baahan yahay in uu akhriyo. Uu rabitaankiisa Ciise iyo qarnigan yimaado iyada oo cod weyn oo cad bogga kasta. Ma sugi karo si ay u arkaan saameynta fariin this ayaa qarni in gaajaysan ujeedo. "
- Lecrae, Grammy abaal marinta- guusha @lecrae artist
"Kac waa buug cajiib ah in qabsatay qalbiga dhaqankeena. Isla markii aan soo gaaray waxaan aan hoos u gelin kara. Trip adag si aad u REAL, oo aad muujinaysaa sida aad nolosha ku nool yihiin sida qof weyn oo da 'yar ee adduunka maanta. akhrin Great. "
- Sam waxaan, NFL linebacker, @thesamacho bani'aadamnimada
"Trip ayaa qoray buug, waxaan jeclaan lahaa in aan dhahnaa akhriyi lahaa markii aan da'da yaraa. uu hamiday, xigmad, iyo rabitaan in aad ka doodid jiilka ka yar waxa ay markhaati u shuqulkii Ilaah samaynaya iyada oo Trip iyo shaqada uu nagu samayn karaa iyada oo loo marayo oo dhan. "
- Kirk Franklin, abaalmarinta Grammy- guusha iyo multi-platina @kirkfranklin duubo artist
"Waan jeclaaday Kac reading. Marar badan kitaabkan aniga qudhaydu waxaan helay Medi- tating ka badan bogagga dib markii aan u akhriyo. Waxaa i dhiirri galiyay, waxyiga, iyo loolan jidka oo dhan iyada oo loo marayo. dhaqanka waxay rajaynaysaa noo waqti lumin, laakiin Ilaah baa inala doonayo in la isticmaalo waqti saameyn our aan loo eegayn our da'da. Tani waa akhrin la yaab leh, waayo, kuwa doonaya in ay u isticmaalaan waqtigooda si caqli ah oo kala ah boqortooyada. "
- Qaraarada Justin ee, NFL dib socda @JForsett
"Sidaas inta badan aan ka hadlo oo raba in loo kala, laakiin ma run ahaantii aad u hesho ilaa iyo wax samayn. My saaxiib, Trip Lee, ayaa qoray buug in dab iftiimin doono jiil in uu baray in ay ka soo qaato jidka fudud. Waxa uu noo taagantahay 'kaca' oo ku nool sheekada in Ilaah abuuray noo. Waan ogahay doonaa waxaan ku talinayaan kitaabkan in qof walba waan ogahay. "
- Stephen Curry, NBA ciyaaryahan @ stephencurry30
Waxaad ka iibsan kartaa buugga cusub ee Trip, Kaca, meel kasta oo buugaagta lagu iibiyo. Faahfaahin intaas ka badan ee Risebook.tv
WIZEMAN • January 28, 2015 at 4:11 waxaan ahay • Reply
Kemi iDREAM • January 28, 2015 at 11:47 waxaan ahay • Reply
Phil • February 3, 2015 at 1:01 waxaan ahay • Reply
Tireo • July 17, 2015 at 11:01 waxaan ahay • Reply